ERW (-Korontada Resistance welded) tuuboyinka Line - Shiinaha Qingdao Haokun Makiinado
ERW (-Korontada Resistance welded) tuuboyinka Line
ERW (-Korontada Resistance welded) tuuboyinka Line Natiijada horumarinta dhaqaalaha degdeg ah ee Shiinaha, uu jiro dalab sare ah oo tayo fiican leh, tuubooyinka ERW dhexroor weyn ee warshadaha gaadiidka saliid & gaaska, biyaha & bulaacada gaadiidka iyo dhismaha rayidka ah. Si uu u dherjiyo shuruudaha macaamiisha our, waxaan leenahay line-soo-saarka Tube noo gaar ah tiga HAOKUN ERW. ILAA-taariikhda, waxaan ku bixisey ERW16 dhexroor weyn ', ERW 20 ", ERW 24" macaamiisha our kala duwan. Waxaan la si loo muujiyo kiis halkaas oo aanu ...
Sidaas darteed horumarka dhaqaale degdeg ah ee Shiinaha, uu jiro dalab sare ah oo tayo fiican leh, tuubooyinka ERW dhexroor weyn ee warshadaha gaadiidka saliid & gaaska, biyaha & bulaacada gaadiidka iyo dhismaha rayidka ah. Si uu u dherjiyo shuruudaha macaamiisha our, waxaan leenahay line-soo-saarka Tube noo gaar ah tiga HAOKUN ERW. ILAA-taariikhda, waxaan ku bixisey ERW16 dhexroor weyn ', ERW 20 ", ERW 24" macaamiisha our kala duwan. Waxaan la si loo muujiyo kiis halkaas oo aanu ku bixisey ERW 25 "Mill Tube in Guangzhou Juyi tuuboyinka Factory ah. In Mill, waxaan sidoo kale loogu talagalay a Horizontal Loop Accumulator, xawaaraha sare ah gariiradda Edge axdi qarameedka iyo Flying Curter ah si kor loogu qaado awoodda ay. Kale ERW 25 "Mill Tube ayaa sidoo kale hadda bixisey noo by in Company WBHO Mozambique. Waxa intaa dheer in tixraac, waxaan ku soo ururinay xogta cilmi-baarista ee fasalka steel ERW 630 X 19.1 mm X80 maktabadda design our. Waxaan si kalsooni leh u odhan kartaa in aanu ka heleen dawladda -of-ku tahay cilmi waayo dhexroor weyn Mill Tube ERW.
Ka dib markii koritaanka si degdeg ah dhaqaalaha Chinese, fasal sare, dhexroor weyn iyo inta jeer sare kama tollayn si toos ah welded tuubooyinka hubkaas ayaa loo isticmaalaa in meelaha sida gaadiidka batroolka, shabakadaha dhuumaha magaalooyinka iyo dhismaha, riixaya ilaa baahida iyaga, waayo, taasu waxay abuurtaa fursado horumarka cusub ee line biibiile shirkadaha wax soo saarka iyo warshadaha qalabka.
Inta lagu guda jiro sano ee la soo dhaafay, by barashada iyo ahmiyadda sare teknoolajiyada mashiinka ERW ka dibadda, waxaan loogu tala galay iyo in la horumariyo khadadka weyn ERW dhexroor-soo-saarka leh xuquuqda hantida aqooneed noo gaar ah. Gaar ahaan cutub kaliya qaar ka mid ah, sida duuban cadaadi, ayaa la xiranayo ee Shiinaha. Ilaa hadda, waxaan ku dhammeeyey dhigaayo khadadka weyn ERW heerkiisa wax soo saarka la caddaymaha: 16 "ERW, 20" ERW, 24 "ERW. Ka mid ah kuwa 20 "ERW, 24" daqiijin jireen wax soo saarka ERW hore rido hawlgalka; Waayo, Guangzhou Juyi Steel tuuboyinka Warshadaha Co., Ltd, set kale dhamaystiran oo 25 "line ERW-soo-saarka leh loop siman. Xawaaraha Sare Machine axdi qarameedka Edge la looxa. Goynta Area Machine iyo dhameystir, durba hawlgalka; set buuxda oo line 25'ERW in la dhoofiyo WBHO ee Koonfur Afrika horay ka yar yahay imtixaanka.
Intaa waxaa dheer, Shirkadda ayaa isaga addoonsada dhan farsamooyinka loo ERW630x19.1mm la fasalka bir X80, oo wuxuu hormariyey JCOE1420x32mm la line-soo-saarka iyo biibiilaha welded fasalka bir X80.
Marinka qeybta steel diyaarinta
Hurgumada leh : Laba wadista fallaadhihii ballaarinta la hawlaha gacanta xiisadda iyo sixitaanka siman of steel strip
Dharka mashiinka steel fidsanaan , Iyada oo 5 duub shaqeeya furay / la xidhay si deg deg ah by dhululubo Haydarooliga.
Habka of saxan alxanka at madaxa iyo dabadaba dhamaado : alxanka Maag, gaashaan gaaska CO2.
Design Mashiinka alxanka Horizontal : goynta Forces iyo alxanka wada.
Positioning bir aaladda ka hor alxanka : Si toos ah loo cabbiro iyo waafajiyaan booska uu ka steel strip.
Accumulator muquuninta : baxsan ee gudaha baxay
Marinka xawaaraha quudinta : Ugu badnaan 75 / min.
Dhererka of line rogid : About 1000mm kor bidhaamayaan
Hab-soo-saarka : wax soo saarka si joogto ah
Speed of line-soo-saarka : 12 / min ~ 25 / min.
Nooca Drive ee jir ugu weyn : duudduuban kasta si gooni ah kala eryay by CNC AC gacanta ku xawaaraha inta jeer variable ama DC gacanta ku xawaaraha
Xirrira fikrad : Hagaaji khadka rogid, hoos habka sameynta
Dhererka of line xarunta : About 1000mm kor ku xusan (qaybta qiimaynta) ee kaabiga
Nooca la xirrira : qafis la xirrira
Dejinta diidanaa dhagaxshiidka , PLC maamusho nidaamka goob deg deg ah iyo goob ay gacanta ku qasbay
Waanwaanta duub dhagaxshiidka : PLC gacanta ku sixitaanka si toos ah iyo sixitaanka buugan.
Xoqid Burr Inner , Burr Inner la laalo iyadoo la isticmaalayo mindi giraanta in la geliyo inta kale qalab gaar ah.
Xoqid Burr dibadda , Laba scrapers of Burr dibadda ah iyo mid ka mid crimpers of Burr dibadda ah.
S fiisiksiga biibiilaha , Afar taribuunka qiimaynta waxaa loo isticmaalaa saara biibiile wareeg ah.
Steel toosinta biibiile , Toosi tuubooyin bir madaxda turkey iyo dhagax qiimaynta.
Mode ee miinshaar duulaya , CNC Double madaxa goynta dhagax duulaya jaray-of mishiinka.
Next: Aarayo tuuboyinka Mill
30inch Longitudinal biyaha hoostooda Arc welded Steel tuuboyinka Mill
30longitudinal biyaha hoostooda Arc welded Steel tuuboyinka Mill
762 Longitudinal biyaha hoostooda Arc welded Steel tuuboyinka Mill
Advanced Weld tollayn Heat Daaweynta
Erw Carbon Steel tuuboyinka Mill
Machine Erw tuuboyinka Mill
Erw tuuboyinka U samaynta Machine
Erw tuuboyinka Machine
Erw tuuboyinka Mill 168
Erw tuuboyinka Mill 219
Erw tuuboyinka Mill 273
Erw tuuboyinka Mill 406
Erw tuuboyinka Mill 508
Erw tuuboyinka Mill 610
Erw tuuboyinka Mill Warshadaha
Erw tuuboyinka Mill-saareyaasha
Erw tuuboyinka Mill Production Line
Erw tuuboyinka Tube Mill
Erw tuuboyinka welded Machine
Erw Production dhuun-Profile
Erw Steel biibiile Mill
Mill Line Erw Steel Tube
been Tube Erw Mill
Erw welded tuuboyinka Mill
galvanized Machine Making Tube
Frequency High Erw tuuboyinka Mill
Joogtaynta High Inducion Alxanka tuuboyinka Mill
Joogtaynta High Alxanka Induction
Joogtaynta High Alxanka tuuboyinka Mill
Joint-Butt Alxanka Machine
Longitudinal biyaha hoostooda Arc Alxanka tuuboyinka Machine
Longitudinal biyaha hoostooda Arc Alxanka tuuboyinka Mill
Lsaw tuuboyinka Machine
Lsaw tuuboyinka Mill
Lsaw tuuboyinka Mill 762
Birta tuuboyinka Machine
Guutada & I.D. Weld goo
tuuboyinka Making Machine
Machine Making tuuboyinka
tuuboyinka Production Line
tuuboyinka xiirashada Machine
tuuboyinka Alxanka Machine
Cadaadis Steel tuuboyinka
Sawl tuuboyinka Machine
Sawl tuuboyinka Mill
SS biibiile Machine Making
Ssaw tuuboyinka Mill
Ssaw tuuboyinka Mill 100
Ssaw tuuboyinka Mill 100 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 1020
Ssaw tuuboyinka Mill 120
Ssaw tuuboyinka Mill 120 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 1220
Ssaw tuuboyinka Mill 142
Ssaw tuuboyinka Mill 142 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 1422
Ssaw tuuboyinka Mill 1620
Ssaw tuuboyinka Mill 1820
Ssaw tuuboyinka Mill 20
Ssaw tuuboyinka Mill 20 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 2032
Ssaw tuuboyinka Mill 2200
Ssaw tuuboyinka Mill 24
Ssaw tuuboyinka Mill 24 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 2540
Ssaw tuuboyinka Mill 3048
Ssaw tuuboyinka Mill 32
Ssaw tuuboyinka Mill 32 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 36
Ssaw tuuboyinka Mill 36 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 3600
Ssaw tuuboyinka Mill 40
Ssaw tuuboyinka Mill 40 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 48
Ssaw tuuboyinka Mill 48 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 508
Ssaw tuuboyinka Mill 56
Ssaw tuuboyinka Mill 56 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 610
Ssaw tuuboyinka Mill 64
Ssaw tuuboyinka Mill 64 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 72
Ssaw tuuboyinka Mill 72 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 80
Ssaw tuuboyinka Mill 80 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 820
Ssaw tuuboyinka Mill 86
Ssaw tuuboyinka Mill 86 inji
Ssaw tuuboyinka Mill 914
Steel tuuboyinka Machine
Steel Machine Making tuuboyinka
Steel tuuboyinka Production Line
Line Production Tube Steel
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 100
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 100 inji
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 1422
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 1620
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 1820
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 2032
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 2200
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 2540
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 56
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 56 inji
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 64
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 64 inji
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 72
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 72 inji
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 80
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 80 inji
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 86
Maankiisa-Final welded tuuboyinka Mill 86 inji
Line Production Tube
Waxaa loo adeegsaday Erw tuuboyinka Mill
Alxanka tuuboyinka Machine
Alxanka tuuboyinka Production Line